Mgbe Di ma Ọ Bụ Nwunye Mmadụ Kwara Iko | Ihe Baịbụl Kwuru
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Ọtụtụ ndị ma na ịkwa iko adịghị mma, ma ọ ka na-etisa ọtụtụ ezinụlọ.
E kwuo na di ma ọ bụ nwunye mmadụ kwara iko, gịnị ka ọ pụtara?
Ụfọdụ na-ekwu na o nweghị ihe ọjọọ dị na mmadụ ịgba n’èzí, nke ka nke, ma ọ bụrụ na onye ahụ bụ nwoke. E nwekwara ndị nke na-ekwu na mmadụ nwedịrị ike ịhapụ di ya ma ọ bụ nwunye ya mgbe ọ bụla ọ sọrọ ya.
Baịbụl kwuru na ọ bụrụ na mmadụ ahapụ di ya ma ọ bụ nwunye ya, ya na onye ọzọ enwee mmekọahụ, ọ kwaala iko. (Job 24:15; Ilu 30:20) Chineke kpọrọ ụdị omume a asị. N’oge ochie, ndị Izrel na-egbu onye ọ bụla mere ụdị ihe a. (Levitikọs 18:20, 22, 29) Jizọs kwuru na ndị na-eso ụzọ ya kwesịrị ịkpọ ụdị omume a asị.—Matiu 5:27, 28; Luk 18:18-20.
IHE MERE NA Ọ BỤGHỊ OBERE OKWU
Ụbọchị nwoke na nwaanyị gbara akwụkwọ, ha kwere ibe ha nkwa. Ọ bụrụ na otu onye n’ime ha akwaa iko, o mezughị nkwa ahụ o kwere. Onye mere ụdị ihe a ‘emehiekwala Chineke.’ (Jenesis 39:7-9) Mmadụ hapụ di ya ma ọ bụ nwunye ya gaa kwaa iko, o nwere ike ime ka ha na ụmụ ha ghara ịna-emekọ ihe. Ihe ọzọ bụ na Baịbụl kwuru na “Chineke ga-ekpe . . . ndị bụ́ di ma ọ bụ nwunye na-akwa iko ikpe.”—Ndị Hibru 13:4.
“Ka alụmdi na nwunye bụrụ ihe kwesịrị nsọpụrụ n’etiti mmadụ niile, ka ihe ndina alụmdi na nwunye gharakwa ịbụ ihe e merụrụ emerụ.”—Ndị Hibru 13:4.
Mmadụ ò nwere ike ịgba di ya ma ọ bụ nwunye ya alụkwaghịm maka na ọ kwara iko?
Baịbụl kwuru na mmadụ nwere ike ịgba di ya ma ọ bụ nwunye ya alụkwaghịm ma ọ bụrụ na ọ kwara iko. (Matiu 19:9) Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na mmadụ akwaa iko, ọ bụ di ya ma ọ bụ nwunye ya ga-ekpebi ma ọ̀ ga-agbaghara ya ka ọ̀ ga-agba ya alụkwaghịm. Ọ bụghị onye ọzọ ga-agwa ya ihe ọ ga-eme.—Ndị Galeshia 6:5.
Ma, anyị ga-echeta na Chineke ejighị alụmdi na nwunye egwu egwu, ọ chọghịkwa ka ihe ọ bụla tisaa di na nwunye. (1 Ndị Kọrịnt 7:39) Obi agaghị adị Chineke mma ma ọ bụrụ na mmadụ ejiri maka ihe na-enweghị isi na ọdụ gbaa di ya ma ọ bụ nwunye ya alụkwaghịm. O doro anya na ịgba alụkwaghịm abụghị ihe e ji egwuri egwu.—Malakaị 2:16; Matiu 19:3-6.
“Ana m asị unu na onye ọ bụla nke gbara nwunye ya alụkwaghịm, ma ọ́ bụghị n’ihi ịkwa iko, ọ na-eme ya ka ọ bụrụ onye nwere ike ịdaba n’ịkwa iko.”—Matiu 5:32.
Di ma ọ bụ nwunye kwaa iko, ò meela mmehie na-enweghị mgbaghara?
Mba. Baịbụl kwuru na Chineke ga-agbaghara onye ọ bụla chegharịrị ma chigharịa ná mmehie ya. Ọ ga-agbagharakwa di ma ọ bụ nwunye kwara iko ma ọ bụrụ na o chegharịa. (Ọrụ Ndịozi 3:19; Ndị Galeshia 5:19-21) Baịbụl kwuru gbasara ndị na-akwabu iko, ha emechaa kwụsị ya ma ghọọ ndị enyi Chineke.—1 Ndị Kọrịnt 6:9-11.
Ihe Chineke mere mgbe Eze Devid mere mmehie gosiri na ọ na-emere ndị chegharịrị ná mmehie ha ebere. Devid na nwunye otu n’ime ndị ọchịagha ya kwara iko. (2 Samuel 11:2-4) Baịbụl kwuru na “ihe Devid mere dị njọ n’anya” Chineke. (2 Samuel 11:27) Devid rịọrọ mgbaghara mgbe a dọrọ ya aka ná ntị, Chineke agbaghara ya. Ma, Devid ji isi ya buru ihe o kotere. (2 Samuel 12:13, 14) Eze Sọlọmọn mechara kwuo na “onye ọ bụla . . . na-akwa iko enweghị uche.”—Ilu 6:32.
Ọ bụrụ na ị kwara iko, rịọ Chineke mgbaghara, rịọkwa di gị ma ọ bụ nwunye gị mgbaghara. (Abụ Ọma 51:1-5) Kpọọ ịkwa iko asị otú ahụ Chineke kpọrọ ya. (Abụ Ọma 97:10) Adịla na-ekiri ndị gba ọtọ ma ọ bụ na-echekarị gbasara inwe mmekọahụ. Achụla nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Zerekwa ihe ọ bụla nwere ike ime ka i chewe echiche otú gị na onye na-abụghị di gị ma ọ bụ nwunye gị ga-esi nwee mmekọahụ.—Matiu 5:27, 28; Jems 1:14, 15.
Ọ bụrụ na di gị ma ọ bụ nwunye gị kwara iko, echefula na Chineke ma otú obi dị gị. (Malakaị 2:13, 14) Rịọ ya ka ọ kasie gị obi ma nyere gị aka, ọ “ga-akwadokwa gị.” (Abụ Ọma 55:22) I kpebie na ị ga-agbaghara di gị ma ọ bụ nwunye gị, unu abụọ ga-agba ezigbo mbọ ka ịhụnanya unu dị otú ọ dị ná mbụ.—Ndị Efesọs 4:32.
Devid chegharịrị mgbe ya na nwunye mmadụ kwara iko. N’ihi ya, Netan onye amụma gwara ya, sị: ‘Jehova emewo ka mmehie gị gabiga.’—2 Samuel 12:13.